इस्पात केज, तार जाल बाड़ निर्माता - Tian Yilong
कुखुरा सञ्जाल को लागी गरम डिप चिकन रनहरु को लागी जस्ती
विस्तृत उत्पाद विवरण सामग्री: तातो-डुबाएको जस्ती तार अनुप्रयोग: कलम र घेरा प्रकार: बुन्नु भन्दा अघि जस्ती (GBW) प्वाल आकार / तार दीया: १ "/ ०.353535 मिमी सुविधा: आर्थिक, मध्यम लाइफटाइम ग्राहक बनेको: स्वीकार्य उच्च लाइट: भारी शुल्क कुखुरा तार, कालो एन ...
विस्तृत उत्पाद विवरण सामग्री: तातो-डुबाएको जस्ती तार अनुप्रयोग: कलम र एन्क्लोउसर एपर्चर: १ ″ वायर डाया: १g गेज चौड़ाई: २ फिट, ft फिट, ft फिट लम्बाई: १०० फिट गहराई: १ cm सेमी उच्च प्रकाश: कालो एनीलेल्ड टाई तार, कालो एनिलेल्ड बाध्यकारी तार चिकन कोप्स चिकन वायर नेट ...
हेक्सागोनल स्टिल स्टुको वायर नेटि Self्ग आत्म-फ्युर्ड
विस्तृत उत्पाद विवरण सामग्री: तातो डिप जस्ती तार, स्टेनलेस स्टील वायर आकार: १ इंच, २mm मिमी फिचर: मध्यम जीवन प्रत्याशा, महान सुदृढीकरण कारखाना बनेको: हो ग्राहक बनेको: स्वीकार्य आवेदन :: प्लास्टरि,, चिनाई र प्लास्टरि High उच्च प्रकाश: कालो एनिलेल्ड टाई तार, bl ...
आउटडोर ठूलो कुकुर धातु पिंजडी पाल्तु कुर्नेल र पहिले भेला हुन्छ
विवरण मोड्युलर वेल्डेड कुकुर कुर्मा सजिलैसँग जम्मा गरिएको घरपालुवा जनावरको केनेल हो। यसलाई अनुकूलित बनाउन सकिन्छ। यो मुख्य रूपमा ठूलो कुकुर, बाख्रा र कुखुराको लागि हो। यो सास फेर्न योग्य, टिकाऊ, स्टक गरिएको छ, र प्यानल पूर्व-जम्मा हुन्छ। विशिष्टता उत्पाद नाम प्रि-एम्बेम्ड वेल्डेड डग केनेल उत्पादन र Color्गीन ब्ल्याक ...
आउटडोर ठूलो चेन लिंक पालतू पिंजरा केनेल पाल्तु जनावर रनको लागि चलाउनुहोस् १० फुट x १० फुट x ft फुट
विस्तृत मोड्युलर चेन लिंक डग केनेल धातु पाइप र चेन लिंक स्टीलको बनेको छ। यो एक प्रकारको भारी शुल्कको पाल्तु जनावर संलग्न छ। ठूला जनावरहरूको बाहिरी जीवनका लागि धेरै उत्कृष्ट, यो सास फेर्न योग्य, टिकाऊ र स्टक गरिएको छ। घरपालुवा जनावरहरू, क्यारियरहरू र पशु आउटडोर खेलको लागि घरहरू। विशिष्टता उत्पाद नाम मो ...
मोड्युलर कालो पाउडर लेपित इस्पात ट्यूब पाल्तु क्रेट केजहरू कुकुर बोर्डि k केनेलहरू
विवरण मोड्युलर वेल्डेड कुकुर कुर्मा सजिलैसँग जम्मा गरिएको घरपालुवा जनावरको केनेल हो। यसलाई अनुकूलित बनाउन सकिन्छ। यो मुख्य रूपमा ठूलो कुकुर, बाख्रा र कुखुराको लागि हो। यो सास फेर्न योग्य, टिकाऊ, स्टक गरिएको छ, र प्यानल पूर्व-जम्मा हुन्छ। मलिपल कन्फिगरेसनहरू भेला भयो, कुकुर केजले minutes० मिनेट भन्दा कममा सेटअप गर्‍यो। प्रीमियम ...
व्यावसायिक प्लास्टिक कोटेड बगैंचा तार तार जाली बाड्न भारी इस्पात संरचना संग
विस्तृत उत्पाद विवरण सामग्री: इलेक्ट्रिक ग्याल्वनाइज्ड तार रंग: सेतो, हरियो तार दीया: mm.mm मिमी छेद आकार: २०० मिमी एक्स mm 55 एमएम टेक्निक: व्यावसायिक वेल्डिंग अनुप्रयोग: बगैंचाको लागि अलगाव बाड़, आवासीय पोष्ट मोडेल: वर्ग पोस्ट, मशरूम आकार, चतुर्भुज बार बार सुविधा: राम्रो अनुप्रयोग ...
सेतो १ 15 १ 16 १ 16 गेज वायर मेष फेंस, ग्रीन प्लास्टिक कोटेड तार बाड़
कर्वी वेल्डेड इलेक्ट्रो गल्वनाइज्ड वायर मेष फेंसिंग सुन्दर 4.0.० मीमी दीया
विस्तृत उत्पाद विवरण सामग्री: इलेक्ट्रो जस्ती तारको र White्ग: सेतो, हरियो, पहेंलो तार Dia: mm.० मीमी छेद आकार: २००mm X mm 65mm प्रविधि: व्यावसायिक वेल्डिंग अनुप्रयोग: बगैंचा लागि अलग बाड़, सडक पोस्ट मोडेल, वर्ग पोस्ट, चतुर्भुज बार बार सुविधा: राम्रो उपस्थिति, कडा ...
कडा टेक्निकल टीम
हामीसँग उद्योगमा एक मजबूत टेक्निकल टीम छ, दशकौं पेशेवर अनुभव, उत्कृष्ट डिजाइन स्तर, एक उच्च गुणवत्ताको उच्च क्षमता उपकरण बनाउने।
कम्पनीले उन्नत डिजाइन प्रणालीहरू र उन्नत ISO9001 2000 अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थापन प्रयोग गर्दछ।
कम्पनीले उच्च प्रदर्शन उपकरण, मजबूत टेक्निकल फोर्स, मजबूत विकास क्षमता, राम्रो टेक्निकल सेवाहरू उत्पादन गर्नमा माहिर छ।
तपाईं जस्ती वेल्डेड तार बाड़ खोज्दै हुनुहुन्छ? के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंसँग छनौट छ? त्यहाँ दुई प्रकारका गेल्वनाइज्ड वेल्डेड तार फेंसिंग सामग्रीहरू छन्: जीबीडब्ल्यू (बुनाई / वेल्डिंग अघि जस्ती) र GAW (बुनाई / वेल्डिंग पछि गल्भेनाइज्ड)। भिजुअरी तिनीहरू धेरै समान देखिन्छन्। तर नजिकबाट हेर्दा, तपाईं ca ...
तीन किसिमले चिकन तार / हेक्साग्नल तार निकट स्ट्रिंगर बनाउने
१) रिभरफोर्स तार थप्दै (०.m मीटर प्रति एक रिभर्स वायर) सामान्यतया १ मीटर चौडाइ जालीमा एक सुदृढ तार थप्नुहोस्। १.m मीटर चौडाई जालीमा दुई रेन्फोर्स तारहरू थप्नुहोस् २.० मीटर चौडाई नेटिंगमा तीन रीइनफोर्स तारहरू थप गर्नुहोस् नोट: ग्राहकको अनुरोधमा सुदृढीकरण तारको संख्या थप्न सकिन्छ। २) डबल किनारा ई बनाउनुहोस् ...
पीवीसी लेपित / VINYL कोटेड
रोलहरू मेरो काकाको क्वालिटी मिलमा अनुकूलित कोट गर्न पठाइन्छ। यस मिलले विनाइल कोटिंगमा सबै प्रकारको तार जालमा विशेषज्ञता प्रदान गर्दछ, लब्स्टर जालहरू निर्माणमा प्रयोग गरिएको जाल सहित। यहाँ एक उच्च गुणस्तरको, मोटा र लचिलो कोटिंग UV को उपचार गरिएको कालो पीवीसी कडा रूपमा तार जालमा गाडियो। कोटिंग s हो ...
हामी, निर्माण र ट्रेडिंग कम्बो, १ 1990 1990 ० देखि निरन्तर परिचालनमा एक परिवारको स्वामित्वको व्यवसाय। हामी तार, तार जाल र बाड़ र सम्बन्धित आइटमको फराकिलो उत्पादन मिक्स उत्पादन र निर्यात गर्दछौं। हामी तपाईंको सबै तार जाल आवश्यकताहरूका लागि तपाईंको विश्वसनीय स्रोतहरू छौं। हामी गुणस्तरीय उत्पादनहरू उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौं जुन हाम्रो व्यापारको सबै स्तरमा उत्कृष्ट मूल्य र ग्राहक सेवाको अनुकरणीय स्तरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। हाम्रो कला को उपकरण, विशाल अनुभव, वैज्ञानिक गुण नियन्त्रण र समर्पित टीम को विश्वव्यापी अनुप्रयोग को लागी पूर्ण तार जाल समाधान सुनिश्चित गर्दछ।
हामी गुण प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
हामी तपाईको विश्वसनीय स्रोत हौं।
ग्राहक सेवाको अनुकरणीय स्तर।